Maxaa ka dhaxeeya Baydhabo & Xalab - Caasimada Online
Home Maqaalo Maxaa ka dhaxeeya Baydhabo & Xalab
Maxaa ka dhaxeeya Baydhabo & Xalab
WQ: Cabdiaziz Bashir Ashkir
Junaury, 30 2014
Saaka oo khamiis ah waxaan ku waa bariistay.
Saaka oo aroor horre ah,saacadda xaga yagga ah 7:7 am. ama aroornimo San Diego Usa. Ayaan furay Computerka si aan soomaaliya iyo caalamkaba wax uga ogaado, markaan soo maray jaraaidada soomaalida intii aan awooday , waxa ay ka qoreen wadanka , ayaan al jazeera ugu danbaysiiyey qaybteeda afka carabiga, waxaa warkii ugu horeeyey uu noqday wiil yar oo ay macaluul aad ah ay ka muuqato, oo waalidkii dul taaganyahay, guryo bur bur uu ka muuqdo , dad tabaalaysan oo fayl ugu jira cunto. Goobtuna waa Suuriya gaar ahaan Xalab.
Waxaa markiiba igu soo dhacay Baydhabo , Muqdisho Ilaa iyo dhulkaa Jubooyinka dagalddii badnaa ee ka dhacay iyo abaarihii sida guud u sameeyey soomaaliya oo idil . Waxaan is waydiiyeey, side bay Suuriya ahayd markii soomaaliya tan oo kale ka dhacaysay? Waxaa isoo baxay in ay ahayd dawlad wayn oo dhamaystiran ku nool barwaaqo iyo badhaadhe. Balse manta iyadda ayeey haystaa tii nahaysatay wixii ka danbeeyey dagaalkii ehliga ahaa ee ka dhacay Soomaaliya 1991kii.
Waxaa kaloo aan is waydiiyey dawladaha dariska la ah Suuriya ee ay walaalaha yihiin Suuriya, sidda Sacuudiga,Kuwad,Khadar iyo kuwo ka loo badan, oo iyagana manta badhaadhe iyo barwaaqo dugsanaya ma laga yabaa dhibku in uu soo gaadho, oo arinku yahay waxa walaalkaa manta haysta waa balo kugu soo maqan, haddii aadan la qaybsan, oo aadan radin xalka ugu wanagsan ee aad ku joojin kart .
Waxaan shaki kujirin hadalkii Rasuulka scw ee uu ku tilmamay dadka muslimiinta ah in ay yihiin ( Hal Jir) oo haddii ay xubini xanuunsato, uu jirka intiisa kale xanuunsanayo. Tusaalahan qiimiga badan ee xigmadaysan, bal dib u dhugo qofka Muslimka ahoow. Bal ka waran haddii dhaawac kaa soo gaadho lugta, oo aad dhahdo dhayi mayo, daawayn mayo. Maxay noqonaysaa natiijadu? Natiijadu waa xanuun joogta ah iyo dhimasho .
Hadalka Rasuulka csw wuxuu natusayaa , Soomaalia waxa kadhacay haddii aysan dawladaha Muslimka ah wax ka qaban , shaki la aan in aysan iyaguna ladaynin hurdada, waana tan socota manta, oo dalalkii nadaawanayey shalay waxa manta haysta waad aragtaan. Kuwa kale ee manta daawanayana ama wax ka shidaya dabka , iyaguna bari agtooda ka eeg. Waxa dhacaya waa daad socda oo xoog badan oo aan la moosi Karin , haddii la moosayana ubaahan in loo maro wadada saxda ah. Waxaa kaloo laga faaidaysanayaa, hadalka rasuulka scw. Waxa ka jira gudaha soomaaliya haddii aan la isku tanaasulin , la muujin walaalti nimo , oo arinku sidda uu hada yahay loo dayo, gobol waliba gobolka kale , uu ka cararo, dhibka la isku fiirsado, bara kaca iyo boobka la sii wado, in mid waliba goonidiisa uu u naafobi doono, oo arinku sidaa uusan ahaan doonin.
Waxaan leeyahay shacabkab Soomaaliyeed:
Ibnu aadanku wuxuu uga duwanyahay Xayawaanka waa caqliga. Caqliguna kiisa wanaagsan waa in uu doortaa waxa wanaagsan, waa in uu kal sooci karaa wixii shalay ku dhacay ee xumaan ahaa iyo wixii wanaag ahaa .Haddii uu taas kala sooci waayo, wuxuu noqonayaa caqli fadhiid ah.
Waxaad ka wada dharagsan tihiin qabqable,dagaal ooge,madax aan dadka iyo dalka waxba u haynin, meesha ay nagaadhsiyeen. Intaasi waa in ay noogu filataa waayo aragnimo. Waa in aan dib wax u fiirinaa, maalin waliba yaan laguu sheegin, wixii shalay laguu sheegay ee ahaa natiijo dari, ahaana reer hebel ayaan naga celinayaa,xaqeeya ayaan nooga soo dhicinayaa , waa kuwii sidaa ahaa, iwm. Ogoow ninka saas kuleh wax barsho kama bixiyo,gurina kuuma dhiso, caafimaadkagana ma daryeelo.
Noqo mid maskaxda xor ka ah, ha noqon mid la hayste ah, u fakar si shakhsi ah xagga caqliga. Ha noqon midka mar waliba wax loo yeedhiyo. Gumaysi ka xun majiro oo ibnu aadanka ku dhaca kan xaga maskaxda oo lagaa qabsado. Cadwga ugu xun ee qofka ku dhaca , waa isaga oo aan maskaxdda xor ka ahayn.